Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment बलत्कारको लागी युवाले किन गरे यस्तो काम ? पोखराको सबैभन्दा खतरनाक बन्दै गईरहेको छ यस सडक (भिडियो) - Pnpkhabar.com
बलत्कारको लागी युवाले किन गरे यस्तो काम ? पोखराको सबैभन्दा खतरनाक बन्दै गईरहेको छ यस सडक (भिडियो)
पछिल्लो समय देशमा बलत्कार र हत्याका घटनाहरु भईरहेका छन् । यस्ता प्रकृतिका घटनालाई निरुत्साहित गर्न प्रशासन लागि परिरहेको छ तर पनि यस्तो घटनाहरु भैरहेका छन् । पश्चिमाञ्चल इन्जिनियरिङ कलेजका सौरज पौडेल भने ”नो रेप नो मर्डरको नारा” लिएर काठमाडौँ देखि पोखरासम्म पैदल यात्रामा लागेका छन्।
हामी विकास निर्माणको कार्य त गर्छौ तर समयमा सम्पन्न गर्दैनौं । समयमा सम्पन्न गर्न नसक्दा एकले होईन लाखौंले दुःख पाउँछौं । दुःख पनि एक पटक होईन हजारौं पटक । कुरा हो पोखरा लेखनाथ भित्र पर्ने लामे आहाल देखी कोत्रेसम्म रहेको सडकको । लामे आहाल देखिको कोत्रेसम्मको सडक बिस्तारमा भएको ढिलासुस्तीले अहिले हजारौं यात्रले जोखीमा मात्र मोलेका छैनन् स्वास्थ्यमा समेत खेलबाड गरिहेका छन् । सडक बन्न लागेको महिनौ भयो । दिनानदिन यात्रा गर्ने यात्रु धुलै धुलो र खाल्डा खुल्डीको बाटो लामै हिड्न पर्छ ।
पोखरा छिर्ने मुख्य नाका मानिएको पृथ्वीराजमार्गको कोत्रेबाट नै सडकको बेहाल अवस्था देखा पर्छ । कोत्रे नजिकै बाट बिग्रिएको सडक तल्लो गगनगौडा नआएसम्म अत्यान्त जोखिम छ । सडकमा खाल्टा खुल्टी र धुलेले गर्दा कति पय अवस्थामा पर्यटक बस समेत फसेका छन् । यो सडकको स्तरोन्नती कहिले सम्म होला ? हेर्नुहोस भिडियोमा :
‘द भ्वाइस अफ नेपाल’सँग नाम जोडिदा मोडल रश्मीलाई आयो ज्यान मार्ने धम्कि, भनिन्, ‘अब म परिवारसँग पनि सम्झैता गर्नेछु’ [हेर्नुहोस भिडियो सहित्]
यी नेपाली युवाको साउदी जेलभित्रको दर्दनाक कथा : ‘मैले ट्वाइलेटको पानी पिएर बाच्नु पर्यो’ [हेर्नुहोस भिडियो सहित्]
पूर्व राजा हेर्न पोखरामा जनताको तछाडमछाड, यस्तो नाराले भयो भव्य स्वागत (भिडियो)
छोराको उपचारका लागि बाजुरादेखि काठमाडौँ, भन्छन, “पैसा नभए पनि मान्छे मार्न त भएननी” [हेर्नुहोस भिडियो सहित्]
र्यापर निर्णय श्रेष्ठको दुरुस्तै डुप्लिकेट को हुन् यी व्यक्ति [हेर्नुहोस् भिडियो]